DAAWO VIDEO: ”Haddaan Garowshiiyo laga bixin dhibka jira, Somaliland meel fog baa laga dooni doonaan”! | HalQaran.com
DAAWO VIDEO: ”Haddaan Garowshiiyo laga bixin dhibka jira, Somaliland meel fog baa laga dooni doonaan”!
Burco (Halqaran.com) – Prof. Cali Khaliif Galayr ayaa magaalada Burco uga qweb galay Shirka Xisbiga Wadani uu Qabsaday, taasoo loogu casuumay “Khaatumo State ahaan ”.
Prof. Galayr wuxuu bogaadin u jeediyey Magaalada Burco, isagoo sheegay inay door fiican ku lahaayeen Taariikhda, Wuxuuna xusay muhiimada ay leedahay haddii lagu guulaysto Shirarka la doonayo in lagu qabto ee lagu midaynayo Burco.
Wuxuu sheegay inaan laga hari Karin isbadalka iyo Kacdoonka ka socda Geeska Afrika, oo Somaliland saamayn ku leh, Wuxuuna xusay in Aragti dheer laga sugayo Xisbiyadda inay Karkariyaan Siyaasadda.
Cali Khaliif Galayr ayaa waxa uu ka hadlay xaalada Somaliland, isagoo sheegay inaan la dhayalsan karin Kacdoonada Jabhadaha Awdal iyo Sanaag, “Haddaan la dareemin, haddaan loo dedaalin, Haddaan Garowshiiyo laga bixin dhibaatooyinka jira, Somaliland meel ayaa laga dooni doonaan,” ayuu yiri Galayr.
Khaatumo ayaa horay heshiis aan miro-dhalin waxay ula gashay Somaliland, iyadoona fulinta Heshiiskaasi weli loo fadhiyo.
Halka Hoose Ka Daawo Muuqaalka Cali Khaliif Galeyr: